Max 20W Full Cover Fibre Laser Fanamarihana Machine ...
30W milina fanamafisam-peo laser miaraka amin'ny ...
50W Raycus Mizara Laser Manamarika Fanamarihana Machine ...
Raycus 30W Cabinet Fibre Laser Fanamarihana Machine ...
55 x 35-1 / 2 mirefy 130W CO2 Laser Engraver ary ...
Hangzhou Mingjue Technology CO., LTD dia orinasa fampidirana indostria sy varotra natsangana tamin'ny taona 2016. Miara-miasa amin'ny orinasa ambony telo izahay hanome vokatra avo lenta ho an'izao tontolo izao. Hatramin'ny nananganana ny orinasa dia niasa mafy izahay mba ho lasa mpitarika amin'ny indostrian'ny sokitra, fanapahana ary marika. Mpanavao isika. Mpanapaha olana isika. Manolo-tena izahay amin'ny famolavolana sy hanome ny rafitra laser avo lenta indrindra manerantany.
Aiza ny sehatry ny asa aman-draharaha eto aminay: hatreto dia nanangana rafitra mpamatsy prosy any Algeria, Egypt, Iran, Afrika atsimo, India, Malaysia ary ireo firenena Azia atsimo atsinanana izahay. Any amin'ny Moyen Orient sy Amerika atsimo ihany koa. Manana mpiara-miasa sy mpanjifa marobe izahay.
Dingana 1: Ny olana voalohany dia ny fanohanana. Betsaka ny fanafarana mora vidy, avy any Shina ny ankamaroany eny an-tsena. Saingy masera sarotra ny laser ary vaky tokoa izy ireo ary mila amboarina. Hamarino tsara fa ...
Ny milina fanaovana laser Laserartist CO2 manome sokajy isan-karazany dia azo atao. Maromaro kokoa noho ny mpanamboatra router na ny milina fanodinana, ny mpandika laser CO2 dia afaka manamboatra haingana ny tranokala ...
Ny fahombiazan'ny milina fanamarihana laser dia hihena miadana rehefa avy ampiasaina mandritra ny fotoana maharitra. Inona no anton'izany? Inona avy ireo antony lehibe manimba ny kalitaon'ny laser marika ...
Taona maro lasa izay, ny milina fanaovana sokitra tamin'ny laser dia tsy afaka manao sary sokitra kely fotsiny noho ny fetra ara-teknika. Miaraka amin'ny fanavaozana tsy tapaka sy ny fampandrosoana ny teknolojia, ny motherboard fanaraha-maso mpamokatra ...